Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 2) | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Ossète Pangasinan Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Raha tapa-kevitra ianao hoe tsy maintsy hisaraka aminy, dia fidio tsara ny toerana sy ny fotoana hiresahanareo. Ahoana izany?
Eritrereto hoe ahoana raha ianao no teo amin’ny toerany. (Matio 7:12) Tianao ve raha eo imason’olona ianao no hilazany fa vita hatreo ny aminareo? Mazava ho azy fa tsia.
Aleo koa tsy hafatra an-telefaonina na e-mail no alefa, raha tsy hoe tsy afa-manoatra angaha ianao. Mitadiava kosa fotoana sy toerana hahafahanareo hiresaka. Zava-dehibe mantsy ilay horesahina.
Inona amin’izay àry no holazainao? Nampirisika ny Kristianina ny apostoly Paoly, mba ‘hilaza ny marina’ amin’ny namany avy.—Efesianina 4:25.
Mila hentitra ianao, nefa koa hahay handanjalanja. Lazao mazava tsara hoe nahoana ianareo no tokony hisaraka, araka ny hevitrao.
Tsy voatery hitanisa ny fahadisoany ianao, na koa hokianinao eo daholo izay tsy tianao aminy. Aza miteny hoe: “Ianao tsy...”, na hoe: “Ianao tsy ... mihitsy.” Asongadino kosa izay tsapanao sy izay eritreretinao, ka milazà teny toy ny hoe: “Olona ... no mety amiko”, na “Tokony hisaraka isika, araka ny hevitro, satria...”
Asehoy fa hentitra ianao. Aza miova hevitra intsony na dia mandresy lahatra anao aza izy. Tadidio fa antony lehibe no nahatonga anao hisaraka aminy. Mitandrema àry raha mitady tetika tsy hisarahanareo izy. Hoy i Lalaina: “Mody nanao nampalahelo be foana ilay ankizilahy, tamin’izaho nisaraka taminy. Tiany hangoraka azy angamba aho. Nalahelo azy tokoa aloha aho e! Fa tsy nataoko nampiova hevitra ahy izany.” Tazòny hatramin’ny farany àry ny teninao. Aoka ny teninao rehefa tsia dia tsia.—Jakoba 5:12.
Tsy kilalao ny fanambadiana fa mandra-pahafaty. Raha tena misy mampisalasala anao àry amin’ilay olon-tianao, dia aza odian-tsy hita izany!
Matetika no misy alahelo be ny tantaram-pitiavana amin’ny boky. Miorina amin’ny toro lalana ao amin’ny Baiboly kosa ny tena fitiavana.
Hizara Hizara Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 2)
ijwyp no. 22